Weeraro Kala Duwan Oo Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Hoose. – Bogga Calamada.com
Weeraro Kala Duwan Oo Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Hoose.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin waxey weeraro culus ku qaadeen saldhigyo iyo difaacyo ciidamada Kufaarta Afrikaanta ay ka sameysteen qeybo ka mid ah gobalka Shabeelada hoose.
Weeraradaan ayaa ka kala dhacay degmada Qoryooley iyo deegaanka Bilaal oo horay loo aqooni jiray Buufow,iyadoona warar dheeraad ah laga helayo dagaaladaasi.
Dagaalka ka dhacay degmada Qoryooley ayaa yimid kadib markii ciidamada shisheeyaha AMISOM isku dayeen iney dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan duleedka degmadaasi balse waxey weerar culus kala kulmeen ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo ka war hayay dhaqdhaqaaqyada shisheeyaha.
Dagaalka markii muddo kooban socday ayeey ciidamada Kufaarta Afrikaanta dib ugu laabteen difaacyadii ay kasoo baxeen ee degmada Qoryooley waxey warar hoose xaqiijinayaan in tiro askar ah shisheeyaha dhimasho iyo dhaawac kaga noqotay dagaalkaasi.
Sidoo kale ciidamada Shabaabul Mujaahidiin waxey weerar culus ku qaadeen difaacyada ciidamada Gaalada soo duushay ay ka sameysteen deegaanka Bilaal oo u dhaw deegaanka Shalambood ee gobalka Shabeelada hoose,waxaana deegaankaasi ka dhacay dagaal sidoo kale khasaara lagu gaarsiiyay askarta shisheeyaha.